Aluminum arkay Blades, arkay PCD Blades, Diamond arkay Blades - Qeyn
Aluminum arkay Blades
PCD Polycrystalline Diamond arkay Blades
Foshan reer Qeyn Goynta Tool Co., Ltd. waa soo saaraha ah xirfadeed ee daawaha adag garbaha miinshaar wareeg ah. Waxaan soo saaro garbaha miinshaar wareeg ah qalab tayo sare leh daab scw wax soo saarka, waxaaga adag Luxembourg iyo Jarmal 75crL saxan bir iyo qalab kale oo tayo sare leh. Reer Qeyn inta badan soo saartaa garbaha miinshaar, garbaha goynta aluminium miinshaar, garbaha miinshaar goynta steel, multi-daab daab miinshaar, garbaha miinshaar goynta qori qudhac ah, garbaha goynta plywood miinshaar, garbaha miinshaar goynta biraha, garbaha goynta arkay looxa iyo garbaha soo aragteen ee aan caadiga ahayn, kaas oo hubkaas ayaa loo isticmaalaa in alaabta guriga, aluminium iyo warshadaha hardware.
Arkay PCD Polycrystalline Diamond Blades 305-600Di ...
Arkay PCD Polycrystalline Diamond Blades 300-450Di ...
Arkay PCD Polycrystalline Diamond Blades 150-200Di ...
Arkay Aluminum 405X3.5X25.4X80T 16inch Blades
Arkay Aluminum 355X3.2X25.4X80T 14inch Blades
Arkay Aluminum 305X3.2X25.4X80T 12inch Blades
garbaha aluminium miinshaar reer Qeyn la sameeyey by aluminium laga keeno, kaas oo raagaya iyo oolnimada sare. Dhamaan waxyaabaha our waxaa soo saaray goynta miinshaar oo loo qoray iyo brushless. Codsiga: albaabka, daaqadda, aluminium derbiga daah, ul aluminium, guddi aluminium, aluminium warshadaha, aluminium aalladda khafiif ah, alaabta guriga aluminium, saxanka kulaylka iyo wixii la mid ah.
daab arkay alwaaxa
garbaha miinshaar alwaaxa reer Qeyn la sameeyey by daawaha oo tayo sare leh iyo saldhig, oo waxay leeyihiin muuqaalada sax sare goynta, hir gooyay, cut siman, buuq yar yahay iyo waqtiga cimri dheer. Codsiga: guf qalalan, qori, MDF, plywood, guddi qoryo ku salaysan, darfahoodii qalab iyo dhir kala duwan oo soo saarka.
Ready in la abuuro aad Haas dhagax wax cusub toosan?
Aan ka heli mashiinka saxda ah ee dukaan aad, oo aad u adiga kuu gaar ah oo ay ku fursadaha iyo qoreysa shaqada aad for.
Saw Blade Cutting Aluminum, Aluminum arkay Blades, Woodworking Tct Circular Saw Blade, Wood Cutting Saw Blade,
Cinwaankaaga: No. 2, Warshadaha Road, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town, Degmada Shunde, Foshan, Guangdong, Shiinaha